Dhul-gariirka Premier League: Saamaynta Uu BREXIT Ku Yeelan Doono Kooxaha Ingiriiska Oo Lasoo Bandhigay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Dhul-gariirka Premier League: Saamaynta Uu BREXIT Ku Yeelan Doono Kooxaha Ingiriiska Oo Lasoo Bandhigay
(15-11-2018) Marka uu si rasmi ah u hirgalo ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub, waxa iman doonta arrin dhibaato ku ah kooxaha dalkaas ka dhisan oo ciyaartooyada faraha badan ee ay haystaan ay ka tegi doonaan.
Qorshaha ay Britain kaga baxayso Midowga Yurub ayaa qodob ku jira heshiisku waxa uu dhigayaa in kooxaha Premier League ay haysan karaan 12 ciyaaroy oo aan ahayn kuwa u dhashay dalkaas, taas oo macnaheedu tahay in la tirinayo kuwa kasoo jeeda Midowga Yurub oo aan markii hore loo tixgelin jiray Ajaanib.
Wargeyska The Times ayaa daabacay xog khaas u ah oo uu helay oo ku saabsan xaalad dhul-gariir ah oo kooxaha dalkaasi geli doonaan, kuwaas oo baabi’in doona heshiisyo qaali ah oo meel dhexe maraya oo ay kula jiraan ciyaartooyo waaweyn.
Boqortooyada Britain ayaa illaa hadda wada-xaajood kula jirta midowga Yurub oo ay ka heshiinayaan qaabka ay UK uga baxayso, lacagaha ay ku qasban tahay inay bixiso, cashuuraha iyo arrimo kale, laakiin midda aan markii hore miiska lasoo saarin ayaa ah saamaynta ay arrintani ku keenayso kubadda cagta iyo sida ay u dhibaatoon doonaan naadiyada Ingiriisku.
Cayaartooyo badan oo qandaraasyadoodu dhamaanayaan oo aan British ahayn ayaa marka uu dhamaado xilligoodu ka tegi doona kooxahooda, waxaana xaalad adag geli doona ugu yaraan 13 ka mid ah 20-ka kooxood ee ka ciyaara Prmier League oo u badan kuwa waaweyn, kuwaas oo aan kasoo bixi karin shuruudaha uu dhigayo heshiiska iyo sharciga ay ku kala dhaqaaqayaan Britain iyo Yurub.